Namuhla omama abaningi esizayo bakhathazekile ngomphumela indlela yokulungiselela ibele? Lesi sithakazelo buyafaneleka. Ngoba, lapho kukhona isikhathi ngaphambi obhekwe ingane, kufanele siqiniseke ukuba sizinike isikhathi sokuba umzimba wakho. Esikhathini esizayo, lokhu kuzosiza sigweme izinkinga ezifana esicasulayo ahlukahlukene, ingono imifantu, zonke izinhlobo ubuhlungu ngesikhathi feedings.
Ngokuvamile, ukuqhekeka ivele ingono ngezizathu ukuthi sebele ithenda kwaba ukubhekana izinqubo ezifana ingxenye oncelayo noma ukudonsa njalo.
Yiqiniso, intombazane ngayinye izici zabo bokuphila. Ngokwesibonelo, omunye umama ingenze lutho, kodwa nokho bengasoze kungqubuzana, nge noyedwa lezi zinkinga. Futhi enye intombazane ibele bangaba kabi, futhi bonke ngenxa yokuthi lolu daba engakaze wafunda e mayelana nendlela ukulungiselela isifuba ekunikezeni ukudla.
Akekho owaziyo ukuthi kuyothiwa inqubo ukusuthisa esimweni ngasinye. Ngakho-ke kungcono ukuba banake ngenxa umzimba wakho, kunokuba kamuva e ukuzisola ngeze.
Kusukela ekuqaleni yokukhulelwa kufanele odokotela nesithakazelo indlela ukulungiselela isifuba ekunikezeni ukudla. Abanye basikisela ukuba enze lokhu ku- Ngenyanga yesishiyagalombili sokukhulelwa kuphela uma kungekho imikhawulo odokotela (ikakhulukazi usongo wazalwa kungakabi isikhathi). Njengoba yaziwa, noma iliphi ithonya yangaphandle phezu izingono noma amabele ngokuvamile (kuwukuziphulula, massage, noma ngisho ukuqabulana) kuholela ukukhululwa ngokushesha umzimba we oxytocin hormone, okuhloswe ngalo ezishukumisayo imisipha kwesibeletho. Futhi usongo wazalwa kungakabi isikhathi kuyingozi kakhulu.
Ngakho, uma kukhona ayikho imikhawulo, odokotela abaningi batusa, okokuqala kunakho konke, ukwenza massage njalo le izingono, ukuze nabo elithile coarseness. Massage kungenziwa ngosizo we ubhodisi elinama eqinile noma okungenani faka pad ngendwangu indawo, isibonelo, ka terry amathawula. Futhi kubalulekile izikhathi eziningana ngosuku ukugeza esifubeni amanzi kancane abandayo bese ngobumnene ukukuthinta (futhi, ithawula).
Uma unesithakazelo kangakanani ukulungiselela isifuba ukuze ancele, kungcono ukuxoxa ngalesi sihloko nodokotela wakho ukuze belulekwa ezihlukahlukene amafutha yezimonyo noma okhilimu. Lezi zimali kudingeka futhi ukuvimbela ukubukeka of elula izimpawu esifubeni sakhe, futhi isikhumba izingono ngokwawo ayoba nokunwebeka ngaphezulu futhi livikela ekuhloleni. ngihlolwa izosiza ukucacisa ukuma ingono. Futhi uma flat noma nabokhulumile, kungase kudingeke ukuba isihlamba correctors ekhethekile.
Kulabo abane ukukhulelwa kwenzeka ehlobo, kuyoba Amazing omkhulu nsuku zonke umoya zokugeza endaweni evulekile, kodwa ngaso sonke isikhathi emthunzini (ukugwema elangeni).
Emva kokuba ingane endlini, futhi yokudla is hhayi nje esungulwe kodwa usafuna ukuqhubeka ibele emva konyaka, kubalulekile ukulandela ejwayelekile wagxilisa inhlanzeko yomuntu siqu - ugeze izandla ngensipho namanzi, ushawa, hhayi ukuletha ngegciwane le ndlala mammary noma emlonyeni womntwana. Kubalulekile ukugqoka ubhodisi ukhululekile wenza kwezicubu ezithambile, ngaphandle ifaka amanzi angangeni.
omama abaningi ikakhulukazi besaba inqubo enjalo, njengoba ibele ebusuku. Isikhathi esining impela umama ngokubeka ingane ebeleni, ukulala naye. Kodwa, ngenhlanhla, Imvelo uqobo lwayo uye walungiselela ukuthi ngokushesha nje lapho umntwana azizwa egcwele, uyothuma esifubeni, futhi ngeke ukulala ubuthongo ku.
Thabani nengane yakho! Futhi ake kokumncelisa nje injabulo!
Bruise? Uju isitshalo futhi iqhawe!